तनहुँ । १४० मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न लागेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि व्यक्ति तथा सामुदायिक वनको जग्गा अधिग्रहण गरेपछि प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न लागेको छ ।
दमौलीबाट भरतपुरसम्मको दूरीमा पर्ने सवस्टेशनमा लगेर राष्ट्रिय प्रसारणको लाइनमा जोड्न ट्रान्समिटर प्रसारण लाइनका लागि २२० केभीको विद्युत् उत्पादन गरिएको उनले बताए । आयोजनाले विभिन्न स्थानमा वनजंगल, जग्गालगायतका गरी उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेको हो ।
उनले भने, ‘यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावमा परेकालाई रू. एक करोड ३१ लाख ३४ हजार ५१० मुआब्जा वितरण गरिनेछ ।’ उनका अनुसार कृषि सहायतास्वरूप ५९ जनालाई रू. २५ हजारका दरले र करीब ५७ जनालाई जोखिमयुक्त बस्तीअनुरुप क्षतिपूर्ति सहयोग गरिने प्रावधान रहेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुधवारदेखि मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी थाले पनि गृहमन्त्रालयको निर्देशनपश्चात् वितरण कार्य रोकिएको छ ।
एउटै खोलामा ८ जलविद्युत आयोजना